ÉGWÚ ÉKÉ, AGBA NKE ATỌ NA-ABỊA NSO – hoo!haa!!
ÉGWÚ ÉKÉ, AGBA NKE ATỌ NA-ABỊA NSO
Ndị agha nke Naijiria ekwuela na ha na-adị ezigbo njikere ihụ na ha bịara gbakwaa egwu eke agba nke ugboro atọ ya n’ọdịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị.
Mgbe ọ na-agwa ndi nta akụkọ okwu n’isi ụlọ ọrụ usuu nke ndi agha dị n’Ụmụahịa, nke steeti Abịa ụnyahụ, onye isi ọhụrụ nke usuu “82 Division Enugu” bụ Ọchịagha Imanuel B. Kabuk gwara ndi agha ka ha dị njikere maka ikwado ịgba yabụ egwu n’usoro ọ ga-esi amasị onye isi ndi agha ala anyị bụ Ọchịagha Tukur Buratai.
Ọ gwara ndi agha ya ka ha dị njikere maka ịna-anara ozụzụ kwa mgbe kwa mgbe maka ihe omume egwu eke, bụ nke na-abịazị dịka ihe omume kwa-afọ.
O kwere ndi ọdịda-ọwụwa anyanwụ nkwa, inye ha nchekwa bụ ịgba, ọ kachakwa kịta oge emume Ekeresimesi na-akpụdebe nso.
Ọ sị na egwu eke abụghị naanị maka egwuregwu mmegharị ahụ, kama na ọ bụ ọzụzụ pụrụ iche ana enye ndi agha maka nchekwa nke imerime obodo.
Ọchị-agha a kwuru na onwere ka esi nwee ihe iche aka mgba dapụtara n’ọwụwa anyanwụ mgbe ndi agha na-anara ọzụzụ a, na ha nwere ike igosi ihe ha ji bụrụ ndi agha nakwa ihe ha mụtara na yabụ ọzụzụ. Ọ sị na ihe bụ isi sekpụ ntị na nke a bụ iji hụ na ndi ọwụwa anyanwụ nwere nchekwa na udo tọrọ atọ.
Ọ sịrị na inye ndi agha ọzụzụ bụ ozuru mba ọnụ, were kwue na aga na-enyerịrị ndi agha Naijiria ọzụzụ mgbe niile.
Ọ sịrị na ọzụzụ a abụghị naanị maka egwu eke n’ihi na-enwere ihe ana-akpọ ọzụzụ nke ihu ọrụ. Ọ kwuru na nke a bụ ihe zuru usuu niile nke ndi agha Naijiria ọnụ, ebe n’ebe ha anọla. Ọ sịrị na ka ihe si gbata kwụrụ ugbu a, n’ọdara ha n’aka inye ọzụzụ a, na ha ga-adị nkwadobe inye ọzụzụ a n’ụzọ ọga-adaba n’atụmanya nke onye isi ndi agha ala anyị, ka ewere nweta ihe atụrụ anya n’aka ọzụzụ a.
Ọchị agha Kabuk bụ onye were ọkwa ọrụ n’aka Ọchịagha Adamu Baba Abubakar ka ọnwa Ọgọọst dị n’abalị isii kwuru na ebum n’obi onye isi ndi agha nke ala anyịṅ bụ ka enwee ndi agha azụrụ azụ nwere ike ibagide ọnọdụ ọbụla dika iwu ala anyị si chọọ n’aka ha.
Previous Post: ENYELA GỌỌMENTI ETITI IWU, KA Ọ TỌRAPỤ ỤMỤ BIAFRA EJI EJI
Next Post: ALỤM DI NA NWUNYE
Ọ dị egwu. Ma ka m jụọ, ọ bụ n’Ọwụwa Anyanwụ ka ọ bụ n’Ọdịda Anyanwụ ka a ga-agba ya bụ egwu eke?